किर्गिस्तानी २ हेलिकोप्टरले नेपाललाई कति तिर्छन् पार्किङ शुल्क?
नेपाल लाइभ आइतबार, माघ ४, २०७७, २०:१५
काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १ जनवरीदेखि २ वटा किर्गिस्तानी हेलिकोप्टर पार्किङ गरी राखिएका छन्। रसियाली कम्पनीले निर्माण गरेका २९ वर्ष पुराना ती दुई वटा एमआइ–१७ हेलिकोप्टर कम्तीमा पनि जनवरी २९ सम्म पार्किङ गरिने निश्चितप्राय छ।
विमानस्थलमा कुनै पनि जहाज वा हेलिकोप्टर निशुल्क पार्किङमा राख्न पाइँदैन। विमानस्थल कार्यालयले तोकेअनुसार पार्किङ शुल्क भने जहाजअनुसार फरक हुन्छ। तर दुई वटा किर्गिस्तानी हेलिकोप्टर पार्किङबाट नेपाललाई कति आम्दानी हुन्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ।
कुन जहाज पार्किङ गर्दा कति शुल्क लिने भन्ने व्यवस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ मा व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ अनुसार विमान पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीअनुसार ५० हजार किलोग्रामसम्मका जहाजको पार्किङ शुल्क प्रति 'पार्किङ घण्टा' प्रतिहजार किलोग्राम १ डलर लाग्ने व्यवस्था छ। ६ घण्टाको समयावधिलाई एक 'पार्किङ घण्टा’ मानिन्छ। सो आधारमा दिनमा ४ पार्किङ घण्टा हुन्छ।
विमानस्थलमा पार्किङ गरिराखिएका ती दुवै वटा हेलिकोप्टरको तौल १३-१३ हजार किलोग्राम छ। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एउटा हेलिकोप्टरले दैनिक ५२ डलर तिर्नपर्ने हुन्छ। यसमा पनि थप १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ।
सोहीअनुसार २ वटा हेलिकोप्टरले दैनिक १ सय ४ डलर भाडा तिर्नुपर्छ। सोही आधारमा २९ दिनसम्मको भाडा ३ हजार १६ डलर हुन्छ। यसलाई नेपालीमा प्रतिडलर १ सय १७ रुपैयाँको दरमा हिसाब गर्दा ५२ दिनको पार्किङ शुल्क ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। साथै बिल जारी भएको दिनको रकममा थप १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले जनाएको छ।
कसरी आइपुगे हेलिकोप्टर?
ढाकाबाट काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण भएका हेलिकोप्टर पार्किङका लागि किर्गिस्तानको सिभिल एभिएसनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा प्राधिकरणले जनवरी ९ सम्मका लागि पार्किङ अनुमति दिइएको थियो। तर, पुनः २९ तारिकसम्मका लागि पार्किङ अनुमति लिएर पार्किङमा जहाज राखिएको छ। जहाज जनवरी १ मा काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए।
‘हेलिकप्टर हेली स्काई भन्ने कम्पनीले नेपालमा ट्रान्जिट अवतरण अनुमति मागेर ल्याएको थियो। सुरुमा उसले जनवरी ९ सम्मका लागि काठमाडौंमै पार्किङ गर्न अनुमति मागेको थियो। सोहीअनुसार पार्किङअनुमति दिएको थियो,’ प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘पुनः उसले २९ जनवरीसम्मका लागि पार्किङ अनुमति मागेको अनुमति दिइसकेको छ। उसले यहाँ पार्किङ मात्रै गर्ने हो। व्यवसायिक उडान गर्न पाउँदैन। जहाज पार्किङबाट प्राधिकरणलाई आम्दानी समेत भएको छ।’
पोखरेलका अनुसार हेली स्काइले ढाकामा रहेका हेलिकप्टर काठमाडौं हुँदै भारतको नयाँदिल्ली लिन खोजेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको थियो। ‘यी हेलिकप्टर नेपालमा उडाउन पाइँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले खाली विमानस्थलमा अवतरण तथा पार्किङको अनुमति मात्र दिएका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार पनि हामीले यो दिनुपर्छ।’
पार्किङ अनुमति लिएर चालक दलका सदस्य इन्डोनेसिया फर्किइसकेका कारण हेलिकोप्टर नेपालमै रहेको भन्दै विभिन्न कोणबाट शंका उत्पन्न भएको छ।प्राधिकरणका अनुसार भारतमा उडान अनुमति लिने प्रक्रिया लम्बिएका कारणसमेत नेपालमा हेलिकोप्टर लामो समय नेपालमै रहने अवस्थासमेत आएको हो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खाने बाटो खुल्यो, ७ वर्षको ३० करोड रकम बाँडिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लामो सयमदेखि रोकिएको बोनस वितरण गर्न बाटो खुल्ला भएकाे छ। प्राधिकरणकाे नाफाबाट बोनस वितरणका लागि छु... बिहीबार, फागुन २०, २०७७